MDC neZanu-PF Dzofara neHurukuro Dzakaitwa naVaZuma?
Kurume 19, 2010
Mapato ose ari muhurumende yemubatanidzwa anoti akafara zvikuru nezvakaitwa nemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, avo vakaenda kuZimbabwe kunoyananisa zviri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa.
VaZuma vakasangana nevatungamiri vemapato ari muhurumende vakapa kurudziro yekuti mukupera kwemwedzi uno, nyaya dziri kunetsa pakati pemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, dzepere zvachose.
Asi vamwe vanoti mapato aya ari kukurumidza kumedza kutsenga achada, sezvo kugadzirisa zviri kunetsa kucharamba kuchitemesa vakawanda musoro.
Vane maonero aya vanoti nyaya iyi ichatoguma yave kuSADC summit nekuti zviri kunetsa kuti Zanu-PF neMDC dziwirirane.
MuMDC munonzi hamuna kuwirirana panyaya yekuti ndiyani angasiiswe basa pakati pemuchuchusi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana, nagavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono. Nyaya yevaviri ava yanetsa zvikuru sezvo MDC iri kuti vakagadzwa zviri kunze kwechibvumirano cheGlobal Political Agreement.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzinotiwo kubva musi wakanyoreranwa chibvumirano ichi musi 15 Gunyana, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakange vasisina masimba ekuita zvinhu vega.
Vanoti nokudaro kygadzwa kwakaitwa vaviri ava naVaMugabe, zvaive kunze kwechibvumirano.
Vamwe vakaoma musoro muZanu-PF vari kupikawo kuti mubato wehomwe muMDC, VaRoy Bennett, havafe vakaitwa mutevedzeri wegurukota rezvekurima, nekudaro vanofanira kuenda kune rimwe bazi.
Vanhu ava vanoti VaBennett, sezvo vakatorerwa purazi, vanogona kukanganisa zvinhu munyaya dzekurima kana vakatoreswa mhiko semutevedzeri wegurukota rezvekurima.
Zanu-PF iri kudawo kuti magavhuna ayo atange apedza temu yawo muna Nyamavhuvhu pasati pagadzwa matsva anosanganisira eMDC.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaTsvangirai, VaNelson Chamisa, vanoti kana hurukuro dzaramba, SADC inofanirwa kupindira, kana kuendesa nyaya ku African Union. Asi VaChamisa vanoti vakafadzwa nemafambiro akaita basa rakabatwa naVaZuma.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaArthur Mutambara, VaEdin Mushoriwa, vanoti zviri kunetsa zvikapera, hurumende inofanira kufambira mberi zvakanaka.
Nhengo iri mukomiti yezvekuburitswa kwemashoko muZanu-PF, VaChris Mutsvangwa, varamba mashoko ekuti Zanu-PF ndiyo iri kutsika madziro panyaya yenhaurirano idzi.